स्थापित लेखिका बन्ने अठोट लिएकी छु
शान्ति लिम्बू स्वभावैले शान्त छिन् । करिस्मा डान्स एन्ड फिटनेस सेन्टरको कोरियोग्राफर, मनोक्रान्ति योग, ध्यान र प्रणायाममा निरन्तर समय दिँदै आएकी एक कुशल साधिका पनि हुन् उनी । कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक उत्तीर्ण गरिसकेकी शान्ति हाल विजनेसमा मास्टर्स गर्दैछिन् । किरात याक्थुङ्ग चुम्लुङ्ग रसमुर शाखाकी उपाध्यक्षको अनुभव लिइसकेकी शान्ति सामाजिक काममा पनि त्यत्तिकै सक्रिय छिन् ।
बुबा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक श्यामबहादुर खिम्दिङ्ग लिम्बू तथा सुनमाया लिम्बूको कोखबाट झापाको महाभारामा जन्मिएकी शान्ति काठमाडौंमा हुर्किन् र बढीन् । विगत एक दशकदेखि श्रीमान् छवि सेलिङ्ग र छोरी चेरिसासँग बेलायत बस्दै आएकी शान्ति साहित्य र संस्कृतिप्रति अत्यन्तै अध्ययनशील छिन् । लाहुरे संस्कृति, डायस्पोरिक समाज र नेपाली महिलाहरुले भोग्नुपरेका सामाजिक तथा नीतिगत अप्ठेराहरुसंग परिचित शान्तिले हालै ‘मिलीजुली’ नामक उपन्यास पाठकमाँझ पस्केकी छिन् । नेपाली साहित्यमा अर्थपूर्ण उपस्थिति र योगदान पु¥याउने उद्देश्यले ‘मिलीजुली’ नामक उपन्यास लेखनबाट नेपाली साहित्यमा डेब्यू गरेकी शान्तिसँग एभरेष्ट टाइम्सका लागि नगेन्द्र नेम्वाङ्गले गरेको छोटो कुराकानी ।
शान्तिजी, सेवारो । हालै पाठकमाँझ ‘मिलीजुली’ उपन्यास पस्कनुभएकोमा बधाई छ ।
उपन्यास लेख्ने प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो ?
सानै उमेरदेखि साहित्य कोर्ने मेरो रुची भएकोले र विदेशमा रहेर पनि नेपाल आमालाई केही योगदान दिन सकुँ भने चाहनाले यो आख्यान तयार पारेकी हुँ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको समाजप्रति सकारात्मक सन्देश जाओस् र समाज परिवर्तनमा सहयोग पुगोस् भन्ने नै हो ।
मिलीजुली नाम नै किन रोज्नुभयो ?
मिली र जुली दुईजना पात्रहरु हुन् । मिलीजुली स्वंयम् सकारात्मक शब्द हो । सकारात्मक सन्देश समाजप्रति उजागर होस् भनेर नै उपन्यासको नाम मिलीजुली राखिएको हो ।
मिलीजुली तयार पार्न कति समय लाग्यो ?
लगभग पाँचवर्ष ।
बेलायतको व्यस्त जीवनमा मिलीजुली लेख्ने समय कसरी मिलाउनु भयो ?
ईच्छा शक्ति हो । इच्छा भएमा समय आफैं निस्कन्छ ।
तपाईको परिवारमा अरु पनि लेखिका छन् कि ?
खिम्दीङ्ग परिवारमा मिलीजुली नै पहिलो प्रयास हो ।
मिलीजुली विमोचन पछिको अनुभव ?
राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । संसारभरिबाट हजारौं टेक्स्ट म्यासेजहरु आइरहेको छ । मिलीजुलीले सोचेको भन्दा बढी नै सम्मान पाइरहेको छ ।
तपाईको भावी योजना ?
अर्को पुस्तक लेखनको तयारी सुरु भइसकेको छ । साहित्यलाई नै निरन्तरता दिँदै १० वर्षभित्र स्थापित लेखिका बन्ने अठोट लिएकी छु । करिब ३/४ वटा पुस्तक पाठकसमक्ष पस्कने योजना बुनेकी छु । र, नेपालीमा मात्र होइन, केही कृति अंग्रेजीमा समेत प्रकाशन गर्नेछु ।
लेखक बन्न चाहने नयाँ पुस्तालाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
अरुले केही भन्ला कि भन्ने कुरामा नअलमली आत्मविश्वासका साथ लेख्न सक्छु भनेर सुरु गर्न सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु ।
मिलीजुलीले समाजमा कस्तो सन्देश दिन खोजेको छ ?
विशेष गरी ‘मिलीजुली’ले महिलाहरुलाई प्रोत्साहन दिने खालका सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको छ । यसले महिलाहरुमा अलिकति भए पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास लिएकी छु ।
अन्त्यमा जजस्ले मेरो पहिलो प्रयास ‘मिलीजुली’ पढ्नुभयो, सबैलाई धन्यवादसहित सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु । र, जस्ले पढ्नु भएको छैन, एकपटक पढिदिनहुन अनुरोध छ ।